(No. 96 , April 2, 2021)
၁။ KNU တပျမဟာ-၃တှငျ စဈကောငျစီတပျမှ တိုကျလယောဉျနှငျ့ဗုံးကွဲ၍ ၁၁ ဦး သဆေုံး၊ ၅ ဦး ဒဏျရာရ
၂။ ရှမျးမွောကျမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အခငျြးခငျြးတိုကျပှဲဖွဈ
၃။ စဈတပျနဲ့ KIA တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ဖားကနျ့မှာ စဈဘေးရှောငျ ၄၀၀ လောကျရှိနေ
၄။ ဖမျးဆီးထားသော ဟားခါးမွို့အခွစေိုကျ CCPRရုံးဝနျထမျး ၂ ဦးကို ဧပွီလ ၇ ရကျနတှေ့ငျရုံးပွနျထုတျမညျ
၅။ ဖာပှနျမွို့ပျေါ ပဈခတျမှုတှကွေောငျ့ ဒသေခံတှေ ဘေးလှတျရာတိမျးရှောငျ
၆။ ထိုငျးနယျစပျရှိ RCSS/SSA တပျစခနျးမြားအားလုံးကို တိုကျခိုကျမညျဟု စဈကောငျစီ ပွော
၇။ ရခိုငျပါတီ ANP ၏ တောငျးဆိုခကျြ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီ လိုကျလြောမှု မရှိသေး
၈။ စဈကောငျစီတပျ၏ရနျကို ရငျဆိုငျခွငျးမှတပါး ရှေးခယျြစရာလမျးမရှိတော့ကွောငျး KNU ထုတျပွနျ
၉။ AA နဲ့ ဆကျသှယျတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ တရားစှဲခံရတဲ့ လူငယျနှဈဦးလှတျမွောကျ
၁၀။ အာဏာသိမျးစဈတပျအောကျ ယုဇန ကုမ်ပဏီဝနျးကို KIA တိုကျခိုကျဖကျြစီး
၁၁။ ရေးတောငျပိုငျးကြေးရှာအခြို့တှငျ ဓါးပွအဖှဲ့ ဆကျကွေးတောငျးခံထား
၁၂။ ကွကှေဲဝမျးနညျးမှုကိုပွသသောအနဖွေငျ့ ရခိုငျသင်ျကွနျအပြျောအပါးလှနျကြူးမှုမဖွဈရနျ မဟာရက်ခိတအဖှဲ့ပနျကွား
၁၃။ စဈအာဏာသိမျးမှု ရကျ ၆၀ အကွာ အကွမျးဖကျဖွိုခှငျးမှုကွောငျ့ ကဆြုံးပွညျသူ ၅၄၀ ကြျောလာ
၁၄။ ကော့ကရိတျမွို့ ဗုံးပေါကျကှဲမှုတှငျ စဈသား ၂ ဦးနှငျ့ ရဲ ၁ ဦး ဒဏျရာရ။
၁၅။ ဆော့လျောမွို့နယျ အမှတျ(၂)မဲဆန်ဒနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါချေါမာဝူဖမျးဆီးခံရ
၁၆။ “ပိုကျလိုငျးမြား ကာကှယျရနျ” တရုတျတပျမြား မွနျမာနယျစပျတှငျ ခထြား
၁၇။ CRPH ၏ ၂၀၀၈ခွဥေဖကျြသိမျးခွငျးကို ဥပဒအေထောကျအကူပွုကှနျရကျ ကွိုဆို
KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၊ တပျမဟာ-၃ ထိနျးခြုပျနယျမွေ ဆောထိ(ရှကေငျြ)မွို့နယျရှိ မယျဒမတျခြောငျးဖြား၊ လခြေိုတောငျအနီးတှငျ မတျလ ၃၀ရကျ၊ ယမနျနေ့ မှနျးလှဲ ၃နာရီခနျ့၌ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့မှ ဂကျြတိုကျလယောဉျနှငျ့ ဗုံးကွဲ တိုကျခိုကျသောကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၁၁ဦးနှငျ့ ဒဏျရာရရှိသူ ၅ ဦး ရှိသညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါ ဗုံးကွဲသညျ့နရောမှာ ဆောထိ(ရှကေငျြ)မွို့နယျ KNU-လကျအောကျခံ KNLA တပျရငျး ၇ နှငျ့နီးပွီး သဆေုံး၊ ဒဏျ ရာရသူမြားမှာ အရပျသားပွညျသူမြားဖွဈပွီး ဒဏျရာရသူ ၅ ဦးတှငျ KNU သဈတောဌာန အဖှဲ့ဝငျတဈဦးလညျး ပါဝငျနေ ကွောငျး အဆိုပါဒသေရှိ လူမှုရေးရာအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျတဈဦးမှ အတညျပွုပွောဆိုသညျ။ ထို့အပွငျ ယနမေ့နကျကလညျး အာဏာသိမျးစဈကောငျစီ၏ တပျဘကျမှ ထိုဒသေရှိ KNU လကျအောကျခံ တပျရငျး ၇နှငျ့ ဆောထိမွို့နယျရုံးဧရိယာတှငျ ဒရုနျးနှငျ့ ထပျမံ စုံစမျးထောကျလှမျးနသေညျဟုလညျး သိရသညျ။“ပထမတဈရကျမှာ လယောဉျဗုံး လာပဈခတြယျ။ ဒုတိယ ရကျမှာ ဒရုနျးနဲ့ လာစုံစမျးထောကျလှမျးတယျဆိုတော့ တျောတျောလေး သတိထားရတယျ။ အရငျတုနျးက တပျရငျး(၇)မှာ ဒရုနျးနဲ့စုံစမျးတာမရှိဘူး။ အခုက ပဈခကျြယူဖို့လားတော့ မသိဘူး။ ခနျ့မှနျးလို့တော့ မရသေးဘူး။”ဟု လူမှုရေးရာအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈဦးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ဖွဈစဉျတှငျ လာရောကျဗုံးကွဲပွီးသညျနှငျ့ ရှတေူးကုမ်ပဏီ အလုပျသမား ငါးဦးမှာ ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့သလို ဒဏျရာရသူ မြားထဲမှ ထပျမံ သဆေုံးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဒသေဆိုငျရာ သတငျးအရငျးအမွဈမြားက ပွောဆိုသညျ။ ဗုံးဒဏျကွောငျ့ လူထိ ခိုကျသဆေုံးသညျ့အပွငျ ဘကျဖိုးကား ၃ စီးနှငျ့ ဆယျဘီးကား ၄ စီး မီးလောငျပကျြစီးသှားပွီး တပျရငျး (၇)နှငျ့နီးသညျ့ ကြေးရှာအခြို့မှ ရာနှငျ့ခြီသော ဒသေခံလူထုမှာ ယခုအခြိနျတှငျ ဘေးလှတျရာသို့ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေကွောငျးလညျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2021/04/knu-%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲ၊ နမ်မတူမွို့နယျတှမှော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအခငျြးခငျြး တိုကျပှဲ ကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး ထိခိုကျခဲ့ရပွီး ကြေးရှာသား ငါးရာနီးပါး ထှကျပွေးနရေပါတယျ။ ကြေးရှာတှေ တဈဝိုကျ စဈရေးထပျမံတငျး မာနပွေီး ထပျမံထှကျပွေးသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျနဲ့ နမ်မတူမွို့နယျတှမှော ရှမျးပွညျတိုကျတကျရေးပါတီ SSPP ရှမျးပွညျ ပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ RCSS နဲ့ တအာငျးအမြိုးသားလှတျမွောကျ ရေးအဖှဲ့ TNLA တပျတှေ တိုကျပှဲကွောငျ့ အရပျသားတှထေိခိုကျမှုရှိပွီး ရာနဲ့ခြီ နရေပျစှနျ့ခှာနရေပါတယျ။
နမ်မတူမွို့နယျ ပနျလုံ၊ မနျကနျြးရှာတဈဝိုကျအခုလ မတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ RCSS နဲ့ TNLA/SSPP ပူးပေါငျး အဖှဲ့တှေ တိုကျပှဲ ကွောငျ့ကြေးရှာအတှငျးကို လကျနကျကွီးတှကေလြို့ အသကျငါးဆယျအရှယျ အမြိုးသမီး တဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့ပွီး နအေိမျ နှဈလုံး မီးလောငျခဲ့တယျလို့ ကြေးရှာရပျမိ ရပျဖတဈဦးက RFA ကို ပွောပါတယျ။ တိုကျပှဲကွောငျ့ ပနျကနျြးရှာ၊ ပနျလုံ ရှာသားတှဟော ပနျသပွေ၊ ရအေိုးရှာတှကေို တိမျးရှောငျနပွေီး နရော နှဈခုမှာ လူဦးရေ လေးရာကြျောရှိနတေယျလို့ ပွောပါ တယျ။ ဧပွီလ တဈရကျနေ့ ဒီကနမှေ့ာလညျး ထပျမံထှကျ ပွေးလာသူတှရှေိနသေေးတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ရှမျးမွောကျဒသေမှာ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး ဖွဈတဲ့တိုကျပှဲတှရေပျဖို့ ဒသေခံတှနေဲ့ အရပျဘကျအဖှဲ့ တှကေ တောငျးဆို တာရှိပမေယျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကေတော့ တှဆေုံ့နိုငျတာ မရှိသေးပါဘူး။ တိုကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး RCSS နဲ့ SSPP တပျတာဝနျရှိသူတှကေို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာ ဖုနျးဆကျသှယျလို့ မရသေးပါဘူး။ TNLA ပွောခှငျ့ရ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး မိုငျးအိုကျကြျော ကတော့ မွောကျပိုငျးဒသေမှာ တပျမတျောနဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတှေ တိုကျပှဲဖွဈပွီးတိုငျး အဲဒီနရောတှကေို RCSS က ဝငျရောကျ နရောယူလာ ခဲ့တာကွောငျ့ အခုနောကျပိုငျး သူတို့သိမျးပိုကျခံထားရတဲ့နရောတှကေို ပွနျလညျရယူရာမှာ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈတာလို့ ပွောပါတယျ။ RCSS နဲ့ဆှေးနှေးဖို့ကတော့ လကျရှိအခြိနျအထိ အကောငျ အထညျမဖျောနိုငျသေးသလို လတျတလောမှာလညျး ဆှေးနှတောမြိုးမရှိသေးဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ https://www.rfa.or g/burmese/news/northern-shan-attack-04012021055617.html
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့မွို့နယျအတှငျးမှာ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီတပျတှနေဲ့ ကခငျြတပျမတျော KIA တို့ကွား တိုကျပှဲတှေ ရှိနသေလို စဈအာဏာရှငျ အလိုမရှိကွောငျး ဆန်ဒပွတဲ့ သပိတျစဈကွောငျးတှလေညျး နစေ့ဉျရှိနပေါတယျ။ ဖားကနျ့မွို့ရဲ့ အဓိက သပိတျစဈကွောငျးတှဖွေဈတဲ့ အေးမွသာယာ၊ ဆိုငျးတောငျ၊ လုံးခငျး- မျောဝမျး သပိတျစဈကွောငျး တှဟော လူဦးရေ ထောငျနဲ့ခြီ နစေ့ဉျ လမျးပျေါထှကျ ဆန်ဒပွနကွေပါတယျ။ စဈကောငျစီလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှရေဲ့ ပဈခတျဖွိုခှဲမှုကွောငျ့ မတျလ ၁၄ရကျနမှေ့ာ ဆိုငျးတောငျးစဈကွောငျးက ကိုကြျောလငျးထိုကျ(၃၁) နှဈ ၊ မတျလ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ အေးမွသာယာစဈကွောငျးက ကိုသနျ့ဇျော(၁၉) နှဈတို့ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျအတှငျး နရောတျော တျောမြားမြားမှာရှိတဲ့ စဈကောငျစီတပျစခနျးနဲ့ရဲစခနျးတှကေို ကခငျြတပျမတျော KIA က ဝငျရောကျ စီးနငျးတိုကျ ခိုကျခဲ့မှုတှေ မတျလ အတှငျးမှာ စတငျခဲ့ပါတယျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျးရဲ့ စဈရေးအခွနေနေဲ့ပတျသကျလို့ ကခငျြတပျမတျော KIA ရဲ့ သတငျးနဲ့ ပွနျကွားရေးဌာနက ပွောဆိုခှငျ့ရ ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တဲ့အခါ “စဈရေးအရတော့ တငျးမာနတေဲ့ အခွနေတှေရှေိ ကွောငျးနဲ့ စဈကောငျစီဘကျက လယောဉျတှနေဲ့ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျလာတာတှရှေိသလို KIA တပျစခနျး အနီးတဝိုကျတှမှော လကျနကျကွီး လကျနကျငယျနဲ့ ပဈခတျတာတှရှေိနတေယျ” လို့ ပွောပါတယျ။
မနကေ့ ဧပွီ (၁) ရကျနမှေ့ာလညျး ဖားကနျ့မွို့နယျ ရှဒူးဇှတျကြေးရှာအုပျစုအတှငျးမှာ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈခဲ့သလို လီဒိုလမျးမတ ကွောက ယုဇနကုမ်ပဏီဝငျးဘကျမှာလညျး တိုကျခိုကျမှုတှရှေိခဲ့တယျလို့ ဒသေခံတှကေ RFA ကို ပွောပါတယျ။ ဒီအခွအေနေ တှကွေောငျ့ဖားကနျ့မွို့နယျအတှငျးမှာ စဈဘေးဒုက်ခသညျ ၄၀၀ လောကျရှိနပွေီး လုံးခငျးကြေးရှာမှာရှိတဲ့ နှဈခငျြးဘုရား ကြောငျးနဲ့ မှျောစီစာကြေးရှာမှာရှိတဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ယာယီ ခိုလှုံနကွေပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/ news/kia-phakant-protest-coup-04012021145354.html
မတျလ ၉ ရကျနတှေ့ငျ ဖမျးဆီးခံထားရသော ခငျြးငွိမျးခမျြးရးနှငျ့ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးအသငျး(CCPR )ရုံးဝနျထမျး ၂ ဦးကို ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲခံထားကွခွငျးဖွဈပွီး ယနေ့ မတျလ ၃၁ ရကျနတှေ့ငျ ဒုတိယအကွိမျ ရုံးထုတျပွီး ဧပွီလ ၇ ရကျနတှေ့ငျ ဟားခါးမွို့နယျတရားရုံးတှငျရုံးပွနျထုတျမညျ ဖွဈကွောငျး လိုကျလံကူညီပေးနသေညျ့ရှနေ့မြေားထံမှသိရသညျ။
“ဒီနတေ့ော့ တရားရုံးက မအားဘူးဆိုတော့ ကြှနျမတို့ကို တှခှေ့ငျ့မပေးတော့ဘူး။ တရားလိုသကျသမှော ဟားခါးမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးက ထှကျဆိုတယျ၊ နောကျပွီးတော့ ဖမျးဆီးခံထားတဲ့ CDM ဝငျထားတဲ့ရဲ၊ ခုလကျရှိထိနျးသိမျးခံထားတဲ့ရဲ မာလျဆောမျ သူတို့ကို သကျသအေဖွဈထှကျဆိုခိုငျးတယျ၊ တရားလိုသကျသေ ရဲ နှဈဦးပေါ့။ အဲဒီ မာလျဆောမျက ထှကျဆို တဲ့ နရောမှာ သူတို့ကို ပိုကျဆံ ငါးသောငျးပေးထားတဲ့လူသညျ ဒီ ဗနျကြဲအိုထောငျး မဟုတျကွောငျး၊ ပိုကျဆံပေးတဲ့လူက
ဗနျကြဲအိုထောငျး ဟုတျသလားဆိုပွီးတော့ ရှနေ့ကေမေးတယျ၊ သို့သျော သူကမဟုတျဘူးတဲ့၊ ဒါဆိုဘယျသူလဲ ၊ ဘယျသူ လဲတော့မသိဘူး Mask အုပျထားတယျ၊ ဒါမယျ့ ဒီကောငျလေးတော့ မဟုတျဘူးလို့ ထှကျဆိုတယျ။ နငျတို့သှားတဲ့ခြိနျ ကားမောငျးတဲ့ လူကိုသိလားလို့ ရှနေ့ကေပွနျမေးတယျ၊ မသိဘူး လို့ပွောတယျ။ ဒါဆိုရငျခု ရှမှေ့ာရောကျနတေဲ့သူ(ပီတာ) ဟုတျသလားလို့ပွနျမေးတယျ။ သူမောငျးတာတော့ မဟုတျပါဘူးလို့ သူ ပွနျထှကျဆိုတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ ထှကျဆိုခဲ့တဲ့ တရားလိုသကျသဖွေဈတဲ့ CDM ဝငျ၊ ဖမျးဆီးခံထားတဲ့ ရဲ ရဲ့ ထှကျဆိုခကျြအရမျးကောငျးလို့ အားတကျစရာပါပဲ။ ဒါမယျ့ တရားသူကွီးနဲ့တော့ ပွောခှငျ့မရှိခဲ့ပါဘူး။” ဟုတရားစှဲဆိုခံထားရသညျ့ CCPR ရုံးဝနျထမျးမြားအတှကျ လိုကျလံကူညီပေးသူ ရှနေ့ေ ကပွောသညျ။
စဈတပျအာဏာသိမျးယူပွီးနောကျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးတှငျ ခငျြးလူမြိုး ၁၅၃ ဦးကြျော ဖမျးဆီးခံရခွငျးဖွဈပွီး ဟားခါးမွို့တှငျ လူဦးရေ ၅၀ ကြျော ဖမျးဆီးခံထားရကွောငျး သိရသညျ။ ယဘေုယအားဖွငျ့ ရဲစခနျးတှငျ ပုဒျမ ၄၇ နှငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲကွပွီး မြားသောအားဖွငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲမှု ပိုမြားကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://www.bni online.net/mm/news-80117
စဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီက ဧပွီလ ၁ ရကျကစလို့ တလတာ အပဈအခတျရပျစဲကွောငျး ကွညောထားပမေယျ့ မွို့ပျေါမှာ တော့ ပဈခတျသတျဖွတျမူတှကေ ရှိနတောပါ။ မုံရှာ ၊ မန်တလေး အပါအဝငျမွို့တှမှော ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနတေဲ့ လူထုတှကေို ပဈခတျမူတှဆေကျရှိနပွေီး သဆေုံးသူတှေ ဒဏျရာရသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ကရငျပွညျနယျ ၊ ဖာပှနျခရိုငျ၊ ဖာပှနျမွို့ ပျေါမှာတော့ ဧပွီလ ၁ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီကြျောအထိ ပဈခတျမူတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ဒသေခံတှေ ဘေးလှတျရာကို ထှကျပွေးနရေတယျလို့ ဖာပှနျမွို့ခံတဦးက ပွောပွပါတယျ။
“မိုးခြုပျတာနဲ့ စပဈနတော။ မီးဖွတျ ၊ အငျတာနကျလိုငျးဖွတျတှလေညျး အကုနျလုပျထားတယျ ။ ၆ နာရီလောကျကနေ စပဈတာ၊ လကျနကျကွီးလညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့နညျးတယျ လကျနကျငယျတှနေဲ့ ပဈနတောမြားတယျ။ သူတို့ကို ကအေနျယူက လုံးဝပဈနတော မဟုတျဘူး၊ သူတို့ပဲ ပဈနတော ။ အခုကလောလောဆညျမွို့ထဲမှာပဲ လိုကျပဈနတော ကအေနျယူ ပါဝငျ ပဈရငျတော့ အကုနျလုံးပွာကကြုနျမှာပဲ။ တောကျလြှောကျ သူတို့ပဲ ပဈနတော ၊ ကအေနျယူဘကျက လာမပဈဘူး။ ပွညျသူလူထုလညျး ဆန်ဒပွတာတို့ဘာတို့ ခေါငျးတောငျမထောငျရဲဘူး။ အခုက ကအေနျယူက လုံးဝမပဈပဲ စောငျ့ကွညျ့တယျ ထငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အရငျတုနျးကဆို ကအေနျယူကဝငျပဈတာရှိတယျ။ အခုပဈရငျတော့ လညျး ပွညျသူလူထုပဲ နာမယျဆိုတော့လေ။ အခုဆိုရငျလုံးဝ အိမျထဲမှာမနရေဲပဲ ခြောငျးကမျးဘေးတှမှောပုနျးနရေတယျ။”ဖာပှနျခရိုငျအတှငျးမှာ မွနျမာစဈတပျနဲ့ ကအေနျယူတို့ဟာ မကွာခဏ တိုကျပှဲတှဖွေဈပွီး ကအေနျယူ ထိနျးခြုပျရာဒသေ မှာရှိတဲ့ ကြေးရှာတှကေိုလညျး အာဏာမသိမျးခငျအခြိနျကတညျးက လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈခတျမူတှရှေိနတောပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ၂၇ ရကျနကေ့တော့ သီးမူထာ မွနျမာစဈတပျစခနျးကို KNUက သိမျးပိုကျလိုကျပွီးတဲ့နောကျ ကရငျကြေးရှာ တှကေို လယောဉျတှနေဲ့ပါ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျခဲ့တာကွောငျ့ အရပျသားအိမျတှေ မီးလောငျပွီး ဒသေခံရှာသားတှေ သဆေုံးတာ ပွငျးထနျတဲ့ဒဏျရာတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကြေးရှာသားတှေ တသောငျးလောကျဟာ ပွညျတှငျးအိုးအိမျမဲ့ ဒုက်ခသညျတှေ အဖွဈ အခုခြိနျထိ တောတောငျတှထေဲမှာပဲ နထေိုငျနရေဆဲဖွဈပါတယျ။ တဆကျတညျးမှာပဲ ဖာပှနျမွို့ပျေါက လူနအေိမျတှကေို လညျး ညဘကျတှမှောပဈခတျမူတှေ လုပျလာတဲ့အတှကျမွို့ခံ လူထုတှဟောအိမျတှကေနထှေကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ ပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/krean-ongoing-local-offensive-by-the-myanmar-army-/5837923.h
မွနျမာ-ထိုငျးနယျစပျ တှငျ စခနျးခထြားသညျ့ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) တပျစခနျးမြားအားလုံးကို တိုကျခိုကျမညျဟု စဈကောငျစီ မှ ခငျြးရိုငျးခရိုငျ မယျဆိုငျမွို့နယျခွားကျောမတီထံ အသိပေးထားသညျသူ သိရသညျ။ ထိုစာကို စဈကောငျစီ ၏ ဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မတျ ၂၉ ရကျတှငျ ကြိုငျးတုံ မှ ပွနျလညျထှကျခှာပွီး ယခုကဲ့သို့သတငျးထှကျပျေါလာခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
RCSS/SSA သညျ တနိုငျငံလုံးအပဈခတျရပျစဲရေး သဘောတူညီစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တခုဖွဈသညျ။ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျ တှငျ နိုငျငံတျော၏ အာဏာကို စဈကောငျစီမှ သိမျးယူပွီးနောကျ NCA လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ (၁၀)ဖှဲ့ က အာဏာသိမျး စဈကောငျစီ နှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဆကျလကျ ဆှေးနှေးမညျ မဟုတျကွောငျး လညျး ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ RCSS/SSA၏ ဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျကွီး ယှကျစဈ ကလညျး စဈကောငျစီ မှ ငွိမျးခမျြးစှာ လကျနကျမဲ့ဆန်ဒပွပွညျသူတှကေို နစေ့ဉျ သတျဖွတျနသေညျ့ပျေါ ကနျ့ကှကျပွီး၊ ပွညျသူဘကျက ရပျတညျသှားမညျဟုလညျး နှငျ့ CNN ၊ Reuter ( ရိုကျတာ) သတငျးဌာန တို့ကို ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထိုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး မွနျမာ-ထိုငျးနယျစပျ လှိုငျကျောဝမျး RCSS/SSA တပျစခနျး မှ အရာရှိ တဦးက “ ကနြျောတို့ စောငျ့ကွညျ့နပေါတယျ။ အဆငျ့သငျ့ လုပျထားပါတယျ။ မွနျမာစဈတပျက ယာမ သောကျပွီး ရူးနတေဲ့သူအတိုငျးပဲ လုပျခငျြတာ လုပျနတော။ စဈရေးပွငျဆငျမှုကတော့ ထူးထူးခွားခွားမတှရေ့သေးပါဘူး” ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ အကွမျးဖကျ စဈကောငျစီ အာဏာသိမျးပွီးနောကျ မွနျမာတဝှမျးလုံး ပွညျသူမြားက စဈအာဏာသိမျးမှုကို အလိုမရှိကွောငျး ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ရာ စဈကောငျစီမှ ပွညျသူမြားကို သနေတျဖွငျ့ ပဈသတျခွငျး၊ ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျး ကို ယနထေိ့ပွုလုပျနသေညျ။ လကျရှိမှာတော့ မွနျမာ-ထိုငျး နယျစပျ RCSS/SSA တပျစခနျးမှလညျး စဈရေးဖွဈလာမညျကို သတိဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့နရေသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/21499
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ(ANP)က တောငျးဆိုထားသညျ့ အကွမျးဖကျ ဥပဒဖွေငျ့ တရားရငျဆိုငျနရေသူမြားအား လှတျပေးရနျ၊ ပွညျနယျစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီတှငျ ရာထူးနရောပေးရနျစသညျ့ဖွငျ့ တောငျးဆိုခကျြမြားကို စဈကောငျစီမှ လကျရှိ အခြိနျ အထိ လိုကျလြော့ခွငျး မရှိသေးကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။
ANP ပါတီမှ နိုငျငံရေး မူဝါဒရေးရာ ကျောမတီဝငျ ဦးဖသေနျးက“အကွမျးဖကျနဲ့ စှဲထားတဲ့ လူတှကေို လှတျပေးဖို့၊ ပွညျနယျ အဆငျ့ စီမံအုပျခြုပျရေးမှာ နရောပေးဖို့ ကနြျောတို့ တောငျးဆိုထားတဲ့ အခကျြတှကေို မလိုကျလြော့သေးဘူးလို့ ပွောလို့ ရတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ သို့သျောလညျး အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒဖွေငျ့ တရားစှဲခံရပွီး အမှုရငျဆိုငျ နရေသော ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြား ပွနျလညျလှတျပေးရေးအတှကျ ပါတီအနဖွေငျ့ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျလုပျကိုငျနပွေီး ANP မှ ပါတီခေါငျးဆောငျတဦး ဖွဈသူ နိုငျငံတျော ကောငျစီဝငျ ဒျေါအေးနုစိနျကိုယျတိုငျလညျး အထကျပိုငျးတှငျ တငျပွပွောဆို နမှေုမြား ပွုလုပျနကွေောငျး ဦးဖသေနျးက ပွောသညျ။ ထို့ပွငျ ANP အနဖွေငျ့ ပွညျနယျ ကောငျစီ ဥက်ကဌ နရောနှငျ့ နိုငျငံတျော စီမံအုပျခြုပျမှု ကောငျစီတှငျအဖှဲ့ဝငျနှဈနရောပေးရနျ တောငျးဆိုထားသျောလညျး လကျရှိအခြိနျအထိ မရရှိသေး သဖွငျ့ အနီးဆုံး ပါတီ ဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေးတှငျ တငျပွ ဆှေးနှေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ပါတီ၏ နိုငျငံရေး မူဝါဒရေး ရာ ကျောမတီဝငျ ဦးဖသေနျးက ပွောသညျ။
အကွမျးဖကျ တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနှေငျ့ တရားစှဲခံရသူမြား အရေးကိစ်စမှာ ယခုအခြိနျတှငျ ရက်ခိုငျ့ စဈတပျ (AA) ကို အကွမျး ဖကျအဖှဲ့ မှ ပယျဖကျြပေးလိုကျပွီ ဖွဈ၍ ဥပဒအေရဆိုရငျ ပွနျလှတျပေးရတော့မညျ ဖွဈကွောငျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျ မယူကမျး ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအသငျး ဥက်ကဌ ဦးမောငျစောဝငျးက ပွောသညျ။“ANP အနနေဲ့ ပွညျနယျစီမံအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှာ တောငျးဆိုတာကတော့ ဒီအခြိနျမှာ မဖွဈနိုငျတော့ဘူးလို့ ကနြျောမွငျတယျ။ ပွညျနယျ အဆငျ့အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှာ ဖှဲ့စညျးပုံ က ပွညျ့သှားပွီလေ။ ဆိုတော့ ကနြျောအမွငျက ANP အနနေဲ့ ဒီကိစ်စတှကေို ပွတျပွတျသားသား ဆှေးနှေးမှ ဒျေါအေးနုစိနျကို ကောငျစီမှာ ထညျ့သငျ့တယျ။ အခု မွငျနရေတာက သမီးကို လငျပေးစား ပွီးမှ အသှငျး တောငျးဆိုနသေလို ဖွဈနတေယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/01/240221.html
၎င်းငျးတို့နယျမွေ၊ ကရငျလူထုနှငျ့ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခှငျ့ကို ကာကှယျရနျအတှကျ အကွမျးဖကျ စဈကောငျ စီတပျ၏ရနျကို ရငျဆိုငျခွငျးမှတဈပါး အခွားရှေးခယျြစရာလမျးမရှိတော့ကွောငျး ကအေဲနျယူ-ကရငျ အမြိုးသားအစညျးအရုံး မူတွျောခရိုငျ၊ တပျမဟာ ၅ က ယမနျနေ့ မတျလ ၃၀ ရကျတှငျ ကွညောခကျြ ထုတျကာ ပွောဆိုလိုကျသညျ။“ယခုအခြိနျတှငျ မွနျမာ တပျမတျော၏ မွပွေငျတပျမြားသညျ အရပျလေးမကျြနှာ အဖကျဖကျမှ ကြှနျုပျတို့၏ နယျမွအေတှငျးသို့ ဝငျရောကျ ကြူးကြျော လာလကျြရှိနပွေီဖွဈသညျ။ ဤအခွအေ နကွေောငျ့ ကြှနျုပျတို့ ပွညျသူထုထု၏ အသကျအိုးအိမျလုံခွုံရေးအတှကျ အလှနျ
စိုးရိမျပူပနျရပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ နယျမွေ၊ ကရငျလူထုနှငျ့၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခှငျ့ကို ကာကှယျရနျအတှကျ တိုငျးပွညျ အာဏာကို တရားမဝငျသိမျးယူထားသော မွနျမာတပျမတျော၏ရနျကို ရငျဆိုငျခွငျးမှတဈပါး ကြှနျုပျတို့၏ အခွားရှေး ခယျြစရာ လမျးမရှိတော့ပါ”ဟု ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလ ၂၇ရကျနကေ့ မူတွျောခရိုငျ သံလှငျမွဈကမျးနံဘေးရှိ သီးမူထာ စဈကောငျစီ တပျစခနျးကို ကအေဲနျယူ တပျမဟာ ၅ တပျဖှဲ့မှ တကျရောကျသိမျးယူခဲ့ပွီးနောကျ စဈကောငျစီ တပျဘကျမှ ကအေဲနျယူ မူတွျောခရိုငျ တပျမဟာ ၅ နယျမွအေတှငျး လယောဉျဖွငျ့ အဆကျမပွတျ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့ သောငျးနှငျ့ခြီသော ဒသေခံ ပွညျသူမြား ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ရမှုအပျေါ ကအေဲနျယူ တပျမဟာ ၅ က ယခုလို ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
စဈကောငျစီတပျ၏ လယောဉျဖွငျ့ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ကလေးသူငယျအပါအဝငျ ၈ ဦး သဆေုံးပွီး ၈ဦးထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ရသလို မူတွျောခရိုငျတှငျးရှိ ဒသေခံ ပွညျသူ ၁၀,၀၀၀ ကြျောသညျ အိုးအိမျ စှနျ့ခှာပွီး နီးစပျရာတောတောငျမြားတှငျ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ရပွီး သံလှငျမွဈ ကမျးနံဘေးတဈ လြှောကျရှိ ဒသေခံရှာသား ၃,၀၀၀ ကြျောသညျလညျး သံလှငျမွဈ၏ တဈဖကျကမျး ထိုငျးနိုငျငံ ဘကျခွမျးသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ရသညျ။ နိုငျငံတကာအနဖွေငျ့လညျး တိုငျးပွညျအာဏာကို မတရားသိမျးယူထားသော မွနျမာတပျမတျောအား အသိအမှတျမပွုရနျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ လုပျဆောငျနသေညျ့ စဈရေးနှငျ့ စီးပှားရေးဆိုငျရာ ရငျးနှီးဆကျဆံမှုအားလုံးကို ရပျတနျ့ရနျ တောငျးဆိုကွောငျး၊ လူသားမြိုးနှယျ အားလုံးကို ဆနျ့ကငျြသော မွဈမှုကို မွောကျစသေညျ့ ပွညျသူထူထုအပျေါ လကျနကျဖွငျ့ ပဈခတျတိုကျခတျမှုမြားကို ခကျြခငျြးရပျတနျ့ရနျ နိုငျငံတကာ အသိုကျအဝနျးက ဖကျစဈမွနျမာ့ တပျမတျောကို ဖိအားပေးရနျ တောငျးဆိုသညျဟု ကအေဲနျယူ မူတွျောခရိုငျက တောငျးဆို ထားသညျ။ http://kicnews.org/2021/03/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%8 0%b1%e1%80%
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့မှာ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)နဲ့ ဆကျသှယျတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမ ၅၂(က)၊ ၅၂(ခ)တို့နဲ့ ဖမျးဆီးတရားစှဲ ခံနတေဲ့ရတဲ့ လူငယျနှဈဦးကို ဒီနမေ့နကျပိုငျးမှာ ပလကျဝမွို့နယျ တရားရုံးကနေ လှတျပေးလိုကျတယျလို့ မိသားစုဝငျက RFA ကိုပွောပါတယျ။ လှတျမွောကျလာသူတှဟော အသကျ ၁၇ နှဈ အရှယျ မောငျစိုးကြျောလငျးနဲ့ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ ကိုထှနျးလငျးဇျောတို့ ဖွဈပါတယျ။ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီက ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈကနေ ပယျဖကျြပေးလိုကျပွီးနောကျ AA နဲ့ ဆကျနှယျတယျဆိုပွီး အကွမျး ဖကျ ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရသူတှကေိုလညျး အမှုပွနျရုပျသိမျးတာတှေ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဒီလူငယျနှဈဦးလညျးတရားလိုကအမှုကိုပွနျရုပျသိမျးလိုကျတဲ့အတှကျလှတျမွောကျလာခဲ့တာဖွဈတယျလို့ မောငျစိုးကြျောလငျး ရဲ့ အမဖွေဈသူ ဒျေါဒေါငျးမလေးက ပွောပါတယျ။ သူတို့ဟာ အပွဈတစုံတရာမရှိဘဲ ဖမျးဆီးတရားစှဲခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး အခုလို လှတျမွောကျလာတဲ့အတှကျ ဝမျးသာမိတယျလို့လညျး သူကဆိုပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ စတငျဘာလ ၂၄ ရကျနကေ့ စိမျ့စငျးကြေးရှာဘကျမှာ တံတားဆောကျလုပျဖို့သှားစဉျ ခမရ ၂၈၉ တပျရငျးကဖမျးဆီးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောကျ AA နဲ့ ဆကျစပျတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ ဗိုလျကွီးသကျနိုငျဦးက တရားလိုလုပျပွီး တရားစှဲဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တပျမတျောနဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)တို့ စဈရေးပဋိပက်ခကာလအတှငျး ရခိုငျပွညျနယျမှာ အခုလို အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြ ရေးဥပဒနေဲ့ ဖမျးဆီးတရားစှဲခံထားရတဲ့သူ ၂၀၀ ကြျော ရှိတယျလို့ စဈတှအေခွစေိုကျ သဇငျဥပဒအေထောကျပွုအဖှဲ့ရဲ့ စာရငျးတှအေရ သိရပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-detainees-04012021132958.html
ဟူးကောငျးခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးပျေါရှိ အာဏာသိမျးစဈတပျ၏ ကြောထောကျနောကျခံ ယုဇနကုမ်ပဏီကို ကခငျြ လှတျလပျရေးတပျမတျော KIA က ဧပွီလ ၁ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျဖကျြဆီးသှားကွောငျး သိရသညျ။
ဘနျကောကျကြေးရှာတှငျရှိသော ယုဇန ကုမ်ပဏီကို ယနေ့ နံနကျပိုငျး ၁နာရီခနျ့အခြိနျ KIA တပျရငျး ၁၄ တပျဖှဲ့က ဝငျ ရောကျတိုကျခိုကျပွီး စကျယန်တရားမြားနှငျ့ ဂိုဒေါငျမြားကို မီးရိူ့ဖကျြစီးပေးလိုကျကွောငျး ဒသေခံတဈဦးထံမှ သိရသညျ။ “ဖွဈ တာက ည ၁နာရီလောကျမှာ ဖွဈတယျလို့သိရတယျ။ ကုမ်မဏီမှာရှိတဲ့ ဘကျဟို၊ ဘဒိုဇာ၊ ကား ၅ စီး၊ ကာလိုဒါ ၃စီး၊ လမျးကြိတျစကျ ၂ စီး၊ ပစ်စညျးထားတဲ့ဂိုဒေါငျ ဒီဟာတှကေို မီးရိူ့ပေးလိုကျတယျလို့သိရတယျ။ ဒီမနကျအတှငျးထိ ကုမ်မဏီ အတှငျး မီးလောငျနတောတှရှေိသေးတယျ”ဟု ဒသေခံတဈဦးပွောပွသညျ။ ဂိုဒေါငျ ၄ ခု နှငျ့ ကား ၂၃ စီး မီးရှို့လိုကျ ကွောငျး သိရသညျ။ ယုဇန ကုမ်ပဏီကို အာဏာသိမျးစဈသားမြားက ယခငျက တပျစှဲထားမှုမြားရှိသျောလညျး ယနေ့ နံနကျ တိုကျပှဲတှငျမူ မရှိကွောငျး သိရသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၀၆ ခုနှဈခနျ့မှစတငျခဲ့သော ဟူးကောငျးခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ စဈအစိုးရ၏ ပီလောပီနံ စိုကျပြိုးရေး စီမံကိနျးအနဖွေငျ့ ကုမ်ပဏီကို လုပျကိုငျခှငျ့ပေးလိုကျသောကွောငျ့ ဒသေခံမြား၏ မွယောအမြားအပွား သိမျးပိုကျခံခဲ့ရသညျ။ ထိုအခြိနျမှ စတငျပွီး ယနေ့ အထိ ဟူးကောငျးဒသေခံမြားနှငျ့ ယုဇန ကုမ်ပဏီကွား မွယော ပွဿနားမြား ပုံမှနျ ဖွဈပျေါနသေော နရောဖွဈပါသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2021/04/01/apr-1-y1/
မှနျပွညျနယျ ရေးတောငျပိုငျးဒသေ ခေါဇာမွို့အနီးတဝိုကျတှငျ ယခုအခါ ဓါးပွအဖှဲ့ငယျတခြို့ ပွနျလညျသောငျးကနျြးလာပွီး ဆရာတျောမြား၊ ကြေးရှာအကွီးအကဲမြားထံမှတဆငျ့ ကြေးရှာမြားကို ဆကျကွေးငှေ သိနျးရာနှငျ့ခြီတောငျးခံထားကွောငျး မှနျသတငျးအဂေငျြစီက စုံစမျးသိရှိရသညျ။“မနျကွီးရှာ သိနျး ၃၀၀ မိထျောလှာကွီး သိနျး ၂၀၀ ကွုံညာရှာ သိနျး ၃၀၀ တောငျးထားတယျ အရောအျနဲ့ အခမျြးအဖှဲ့လို့ သိရတယျ၊ အရငျက လကျနကျခြ အလငျးဝငျခဲ့ဖူးတဲ့ ဓါးပွတှပေဲ အခုတော့ ဒီအလုပျကို ပွနျလုပျနကွေပွနျပွီ” ဟု အမညျမဖျောလိုသော ဒသေခံဆရာတျောတဈပါးက ပွောသညျ။
သို့ရာတှငျ အဆိုပါဆကျကွေးတောငျးခံမှုကို သကျဆိုငျရာကြေးရှာမြားသို့ အခကျြအလကျ မှနျကနျကွောငျး မှနျသတငျး အဂေငျြစီမှ အတညျပွုနိုငျခွငျးမရှိသေးပါ။“ လောလောဆယျ တခြို့ရှာတှကေို ငှတေောငျးထားတယျ၊ သူတို့ဆကျကွေး မပေးရငျ လူကိုပွနျပေးဆှဲသှားမှာ အရမျးစိုးရိမျရပါတယျ နယျမွအေေးခမျြးမှုမရှိတော့ဘူး၊ နောကျပီး စဈတပျကနေ ပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့ကို အငျအားတိုး ခပြေးထားတယျ” ဟု ကြေးရှာအကွီးအကဲတဈဦးက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောကွားသညျ။
ယခငျက ရေးတောငျပိုငျးနှငျ့ ရဖွေူမွို့နယျတို့တှငျ နိုငျဗငျးနှငျ့ နိုငျလှိနျးညီအဈကိုယျအဖှဲ့၊ ဆံရှညျနှငျ့ တောငျကြျောအဖှဲ့၊ အလှနျနှငျ့ အဆောငျးညီအဈကိုယျအဖှဲ့(၁၅ ယောကျ) ၊ မှနျခမျြးအဖှဲ့ (၁၈ ယောကျ) စသညျ့ဓါးပွအဖှဲ့မြားလှုပျရှားခဲ့ကွောငျး သတငျးမှတျတမျးမြားတှငျ တှရေ့သညျ။ သို့ရာတှငျ ဓါးပွခေါငျးဆောငျအခြို့သတျဖွတျခံရသဖွငျ့ အဖှဲ့အခြို့ပွိုကှဲသှား၍ လကျကနျြအဖှဲ့မြားအနဖွေငျ့ ၂၀၁၆ နှဈလယျပိုငျးတှငျ တပျမတျောထံ နောကျဆုံးလကျနကျခအြလငျးဝငျခဲ့ပွီး ပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့အဖွဈ ဆကျလကျရပျတညျလာကွရာမှ နယျမွအေေးခမျြးမှုရရှိလာခဲ့သညျ။ ခေါဇာမွို့တှငျ ခလရ (၃၁) တပျရငျးနှငျ့ ရဲစခနျးတဈခု အခွစေိုကျလကျြရှိသျောလညျး နယျမွကေယျြဝနျး၍ တောတောငျထူထပျသဖွငျ့ ဒသေခံမြားအတှကျ လုံခွုံရေး အပွညျ့အဝရရှိရနျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျသညျ့အနအေထား မရှိသေးပေ။ http://burmese.monnews.org/2021/04/0 1/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%
မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပှားနသေော အရေးအခငျးအတှငျး ပွညျသူမြား သကွေပေကျြစီးမှုမြားရှိနေ၍ သင်ျကွနျအခါကွီး ကာလအတှငျး အပြျောအပါးလှနျကြူးမှုအား မပွသကွပါရနျ မဟာရိက်ခတအဖှဲ့က ရခိုငျပွညျသူမြားသို့ မတ်ေတာရပျခံပနျကွား လိုကျသညျ။ မဟာရိက်ခတအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ အာရျကနျ ဦးမောငျလှ (ခ) ဦးမောငျသနျးနုက “ ကြှနျတျောတို့ အခု ရနျကုနျ၊ စဈကိုငျး တို့၊ မန်တလေး တို့ အပါအဝငျ ကရငျပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားတို့မှာ ဖွဈနတေဲ့ ဆန်ဒပွမှုနဲ့ ပတျသကျ လို့ ဟို ခလေးလေးတှေ သကွေပေကျြစီးနတေယျ။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တိုငျးပွညျမှာ ဒီလို ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမှာ ရခိုငျကနပွေီး တော့ ဒီလို ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ သင်ျကွနျထဲမှာ မျောတျောကားတှနေဲ့ ဆောငျးဘောကျဈတှတေငျပွီး အဲသလို သီခငျြးတှေ အကယျြကွီးဖှငျ့ပွီး ပြျောပြျောပါးပါး မလုပျကွဖို့ ဥစ်စာကို ကြှနျတျောတို့က မတ်ေတာရပျခံတဲ့ သဘောပါ”ဟု နိရဉ်စရာ သတငျးဌာန သို့ ပွောကွားသညျ။
မတ်ေတာရပျခံ ပနျကွားလှာအထဲတှငျ ယခုအခါ ဗမာပွညျ/ တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြား၌ ပွညျသူအပေါငျးရာနှငျ့ခြီ၍ သကွေေ ပကျြစီးနကွေသညျကို မွငျတှရေ့မှုအား အလှနျတရာမှ စိတျမမွဖှေ့ယျခံစားနကွေရသော အခြိနျကာလ ဖွဈပါကွောငျး၊ ရှေးစကားပုံအတိုငျး အိမျရှပေူ့ အိမျနောကျမခမျြးသာ၊ အိမျနောကျပူ အိမျရှေ့ မခမျြးသာ အဖွဈမြိုး ပွညျသူ/ ပွညျသား အပေါငျးတို့မှာ ကွကှေဲဝမျးနညျးဖှယျခံစားနကွေရပါကွောငျး၊ သို့ဖွဈပါ၍ ယဉျကြေးသိမျမှသေ့ော ရက်ခိတပွညျသူ အပေါငျး တို့က သကွေပေကျြစီးသှားကွသညျ့ မိသားစုမြားနှငျ့ထပျတူ ကွကှေဲဝမျးနညျးမှုကို ပွသသောအနဖွေငျ့ သင်ျကွနျအခါကွီး ကာလအတှငျး ဆောငျးဘောကျ(ဈ)မြား တငျဆောငျ၍ ကားကွီး၊ ကားငယျမြားဖွငျ့ အပြျောအပါးလှနျကြူးမှုအား မပွသကွ ပါရနျ လေးစားစှာဖွငျ့ မတ်ေတာရပျခံအသိပေးပနျကွားအပျပါကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
“ အဓိကတော့ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျဟာ နှလုံးသားကောငျး မတ်ေတာတရားကွီးမားတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့က ဖျောထုတျ ပွသတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါလေးကို ကြှနျတျောတို့ တောငျးဆိုတာပါ။ ရခိုငျပွညျသူတှလေညျး နားလညျ သဘောပေါကျလိမျ့ မယျထငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ကနေ သင်ျကွနျကာလအတှငျးမှာ မဖွဈသငျ့တာ မဖွဈရအောငျ၊ ဝမျးနညျးပကျ လကျနဲ့ ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျက မပြျောဘူးဆိုတာကို ပွသဖို့အတှကျ ပွညျသူတှကေို မတ်ေတာရပျခံတောငျး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကြှနျတျောတို့ အခုလုပျတဲ့ ဥစ်စာမှာ နိုငျငံတျောအစိုးရကို ပုတျခတျတာ၊ အစိုးရကို ပုတျခတျလို့ ပွောတာ မပါဘူး။ အဓိက ပွညျသူတှေ နဈနာနတောကို ကြှနျတျောတို့က မတ်ေတာရပျခံတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒါလညျး တဈခကျြ ပွောခငျြ ပါတယျ။” ဟု အာရျကနျ မောငျလှက ပွောဆိုသှားခဲ့သညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-80111
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးမှု ရကျပေါငျး ၆၀ အကွာ အကွမျးဖကျဖွိုခှငျးမှု တှကွေောငျ့ မွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေး ကာလတှငျး ကဆြုံးပွညျသူပေါငျး ၅၄၃ ယောကျ ရှိလာခဲ့ပွီလို့ နိုငျငံရေး အကဉျြးသားမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးအသငျး (အအေပေီ ပီ)က ထုတျပွနျပါတယျ။
ဒီစာရငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျမှ ဧပွီ ၁ ရကျအထိ မှတျတမျး ပွုစုထားတာဖွဈပွီး ဒီအရအေတှကျဟာ အအေပေီပီမှ ကောကျယူရရှိထားတဲ့ အရအေတှကျဖွဈပွီး အမှနျတကယျကဆြုံးသူတှဟော ဒီ့ထကျ ပိုမြားနနေိုငျကွောငျးလညျး ဖျောပွထား ပါတယျ။ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျခံထားရသူ စုစုပေါငျးကတော့ ၂၇၄၁ ယောကျ ရှိနခေဲ့ပွီဖွဈကာ အဲဒီထဲက ၃၈ ယောကျကတော့ ထောငျဒဏျခမြှတျခံထားရပွီး အမှုဖှငျ့ခံထားရပွီး ဖမျးဝ ရမျး ထုတျခံထားရတဲ့အတှကျ တိမျးရှောငျနသေူ ၁၂၆ ယောကျနဲ့ ခုရကျပိုငျးတှအေတှငျး ပွနျလညျလှတျမွောကျလာသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
အအေပေီပီ အနနေဲ့ လကျရှိအခွအေနတှေကေို နစေ့ဉျ စောငျ့ကွညျ့မှတျတမျးတငျ နတောဖွဈပွီး စဈအာဏာသိမျးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖမျးဆီး၊ တရားစှဲဆို၊ ပွဈဒဏျ ခမြှတျခံ ထားရသူတှစောရငျးကို နစေ့ဉျ ထုတျပွနျသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အရပျ ဘကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ အရပျသားတှေ၊ တကျကွှလှုပျ ရှားသူတှေ၊ သတငျးသမားတှေ၊ CDM လှုပျရှား နတေဲ့ ဝနျထမျးတှစေတဲ့ နယျပယျအသီး သီးက ဘယျသူမဆို ဖမျးဆီး၊ ထိနျးသိမျး၊ တရားစှဲဆိုခံထားရတာကို သိရှိပါက ဆကျသှယျ အသိပေး၊ အကွောငျးကွားဖို့လညျး အသိပေးထားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/455703
ကရငျပွညျနယျ ကော့ကရိတျမွို့တှငျ ယမနျနေ့ မတျ ၃၁ ရကျ၊ ည ၇ နာရီခှဲအခြိနျခနျ့ကလကျပဈဗုံးပေါကျကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့ရာ စဈသား နှဈဦး နှငျ့ ရဲတဈဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့တယျလို့ သိရသညျ။ ကော့ကရိတျမွို့မရဲစခနျးအနီး မွနျမာ့စီးပှားရေးဘဏျတှငျ စဈကောငျစီအဖှဲ့၏ ရဲ နှငျ့ တပျမှ လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနစေဉျ ဆိုငျကယျစီးလာသူ တဈဦးက လကျပဈဗုံး ပဈထညျ့ခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျဟု စဈဘကျဆိုငျရာလုံခွုံရေးသတငျးအဖှဲ့ နှငျ့ နီးစပျသူထံမှ သိရသညျ။ ဗုံးပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားပွီးနောကျ လကျနကျငယျ ပဈခတျသံ အခကျြ ၅၀ ကြျောကွားရကွောငျး ကော့ကရိတျမွို့ခံတဈဦးက ဆိုသညျ။
ယခုရကျပိုငျးအတှငျး စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေး လူထုလှုပျရှားမြားကို ကော့ကရိတျမွို့တှငျး၌ မပွုလုပျနိုငျဘဲ မွို့ပွငျ ကြေးရှာမြားတှငျသာ ဆောငျရှကျနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့အလားတူပငျ မွဝတီမွို့တှငျး၌လညျး စဈကောငျစီမှ ခနျ့အပျ ထားသညျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးအဆငျ့ဆငျ့ နှငျ့ တပျအာဏာသိမျးမှုကို ထောကျခံသော အဖှဲ့အစညျးတဈခြို့၏ သတငျးပေး မှုမြားကွောငျ့ စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး လူထုလှုပျရှားမှုမြားပွုလုပျရနျ စတငျစုစညျးစဉျမှာပငျ အဖမျးခံရမှုမြားနှငျ့ နအေိမျ လူနရေပျကှကျအထိ လိုကျလံဖမျးဆီးခံရမှုမြား ရှိနသေညျ။ http://kicnews.org/2021/04/%e1%80%b1%e1%80 %80%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ကခငျြပွညျနယျ၊ဆော့လျောမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂)မှ အနိုငျရရှိထားသညျ့ NLD ပါတီမှလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါချေါမာဝူကို ယနေ့ နလေ့ယျ (၁၁) နာရီဝနျးကငျြခနျ့တှငျ ဖမျးဆီးခံရကွောငျး အမညျမဖျောလိုဒသေခံတဈဦးမှ သိရသညျ။
ဖမျးဆီးခံရခြိနျ ဒျေါချေါမာဝူသညျ မွဈကွီးနားမွို့၊ ပမ်မတီးလီဆူစာပယေဉျကြေးမှုဗဟိုရုံးတှငျ အစညျးအဝေးပွုလုပျနစေဉျ (စရဖ) မှ အမြိုးသား ၃ဦး လာရောကျဖမျးဆီးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိ ဖမျးဆီးခံသှားရသညျ့ လှတျတျောကိုယျလှယျ ချေါမာဝူအား မညျသညျ့နရောတှငျ ထိနျးသိမျးထားကွောငျး မသိရသေး ခြေ။ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျနေ့ စဈတပျမှအာဏာသိမျးပွီးနောကျ ကခငျြပွညျနယျတှငျးရှိ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအား ဖမျးဆီးမူမြားရှိခဲ့သျောလညျး အမြားစု ပွနျလညျလှတျမွောကျပွီးဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2021 /04/01/apr-1-z1/
ရှမျးပွညျနယျ နယျစပျမွို့ မူဆယျတဘကျခွမျးရှိ ဂယျြဂေါငျတှငျ တရုတျတပျမြားကို ခထြားကွောငျး တရုတျနယျစပျရှိ သတငျး ရငျးမွဈမြားအဆိုအရ သိရှိရသညျ။ စဈကားမြားနှငျ့ တရုတျစဈသားမြား နယျစပျသို့ လတျတလော ရကျပိုငျးမြားအတှငျး ရောကျလာခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ တရုတျနိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ သတငျးစကားပေးပို့နခွေငျး ဖွဈကွောငျး တရုတျနယျစပျအခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမြားက ဆိုကွသညျ။
ပိုကျလိုငျးမြားကို ဖောကျခှဲပဈမညျဟု ဆန်ဒပွသူမြားက ခွိမျးခွောကျသညျ့ တရုတျဆနျ့ကငျြရေး စိတျဓာတျမြား မွငျ့မားလာ ခြိနျအတှငျး မတျလ အစောပိုငျးက ရနေံနှငျ့ သဘာဝဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးမြားအား ကာကှယျပေးရနျ စဈကောငျစီကို တရုတျ က တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရှညျလြားသညျ့ ပိုကျလိုငျးမြားသညျ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့မှနေ၍ မကှေး၊ မန်တလေးတိုငျးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျကို ဖွတျပွီး တရုတျသို့ သှယျတနျးထားသညျ။ တရုတျနိုငျငံသညျ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျ စီနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီတို့တှငျ မွနျမာပွညျရှိ ရှေးကောကျခံကိုယျစားလှယျမြားကို ဖမျးဆီးပွီး စဈတပျက အာဏာသိမျး ယူသညျ့အပျေါ ပွညျတှငျးရေးဖွဈသညျဟု ဆိုနသေညျ။
စဈတပျက ပဈခတျ၍ ဆန်ဒပွသူ ၅၀၀ ကြျော သဆေုံးလာသောအခါ မွနျမာအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈ မဟာမိတျ တပျမတျော (MNDAA)၊ တအနျးအမြိုးသား လှတျမွောကျရေး တပျမတျော (TNLA) နှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) တို့ပါဝငျသညျ့ ညီနောငျ မဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့က စဈကောငျစီကို ရှုတျခပြွီး အပဈရပျထားမှုကို ရကျထပျမတိုးကွောငျး ကွညောသညျ။ ညီနောငျမဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့သညျ တရုတျနယျစပျတှငျ အခွစေိုကျပွီး AA က ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နယျစပျတှငျလညျး အခွစေိုကျသညျ။ တရုတျနယျစပျတှငျ အခွစေိုကျသော ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော (KIA) ကလညျး ယခုအခါ မွနျမာစဈတပျနှငျ့ တိုကျပှဲမြား ပွနျလညျဖွဈပှား နသေညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/02/240239.html
ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH ၏ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ(၂၀၀၈)ကို အပွီးတိုငျ ဖကျြသိမျးလိုကျ ကွောငျး ယမနျနကေ့ ကွငွောလိုကျသညျ့အပျေါ ကွိုဆိုထောကျခံကွောငျး ဥပဒေ အထောကျအကူပွုကှနျရကျ (Legal Aid Network)က ဧပွီလ ၁ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
မတျလ ၃၁ ရကျနတှေ့ငျ CRPH က ယခုလို ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ဖကျြသိမျးလိုကျခွငျးသညျ စဈကောငျစီ ကိုယျတိုငျ လကျတှေ့ ဆကျလကျ အသုံးပွုနိုငျခွငျး မရှိစရေေးအတှကျ ကောငျးမှနျသညျ့ ခွလှေမျးကို လှမျးလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ့အပွငျ အခကျအခဲ၊ ပွဿနာအမြိုးမြိုးနှငျ့ အကွံပွုခကျြမြားအကွားမှ CRPH ၏ ပွတျသားသညျ့ ခွလှေမျးမြား လှမျးသညျ့အခါတိုငျး ၎င်းငျးတို့ကှနျရကျအနဖွေငျ့ ကွိုဆို၊ ထောကျခံ၊ အသိအမှတျပွုသညျဟု ဆိုသညျ။
ထို့အပွငျ စဈအာဏာ ရှငျစနဈကို ပိုမိုထိရောကျစှာ တိုကျပှဲဝငျနိုငျစရေေးအတှကျကိုလညျး ၎င်းငျးတို့အဖှဲ့အစညျးက လှတျ လပျစှာထုတျဖျောခှငျ့ အခွခေံတှငျ ပှငျ့လငျးစှာ ဝဖေနျထောကျပွမှုကိုလညျး CRPH အနဖွေငျ့ လကျခံစဉျးစားပေးလိမျ့ မညျဟု ယုံကွညျကွောငျး ဥပဒအေထောကျအကူပွုကှနျရကျ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားဖျောပွထားသညျ။
CRPH ၏ထုတျပွနျခကျြထဲတှငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ(၂၀၀၈ခုနှဈ)သညျ စဈအာဏာရှငျဝါဒ သကျဇိုးရှညျရနျ ရညျရှယျ ရေးသားထားရုံမြှမက ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ ပွညျထောငျစု ပျေါပေါကျရေးအတှကျ အဟနျ့အတားပွုလြှကျရှိသော ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒတေဈခုဖွဈသညျဟု ဆိုထားသညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီသညျ ၂၀၂၁ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျ နတှေ့ငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ (၂၀၀၈ခု နှဈ)ပါ ပွဌာနျးခကျြမြားကို ခြိုးဖောကျလကျြ နိုငျငံတျောအာဏာကို အဓမ်မသိမျး ယူခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဤဖှဲ့စညျးပုံမှာ ပကျြ ပွယျခဲ့ပွီးဖွဈသညျဟု ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2021/04/crph-%e1%81%8f-%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%80%e1
၁။ KNU တပ်မဟာ-၃တွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ တိုက်လေယာဉ်နှင့်ဗုံးကြဲ၍ ၁၁ ဦး သေဆုံး၊ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
၂။ ရှမ်းမြောက်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်
၃။ စစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဖားကန့်မှာ စစ်ဘေးရှောင် ၄၀၀ လောက်ရှိနေ
၄။ ဖမ်းဆီးထားသော ဟားခါးမြို့အခြေစိုက် CCPRရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင်ရုံးပြန်ထုတ်မည်
၅။ ဖာပွန်မြို့ပေါ် ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်
၆။ ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ RCSS/SSA တပ်စခန်းများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု စစ်ကောင်စီ ပြော
၇။ ရခိုင်ပါတီ ANP ၏ တောင်းဆိုချက် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ လိုက်လျောမှု မရှိသေး
၈။ စစ်ကောင်စီတပ်၏ရန်ကို ရင်ဆိုင်ခြင်းမှတပါး ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်
၉။ AA နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးလွတ်မြောက်
၁၀။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အောက် ယုဇန ကုမ္ပဏီဝန်းကို KIA တိုက်ခိုက်ဖျက်စီး
၁၁။ ရေးတောင်ပိုင်းကျေးရွာအချို့တွင် ဓါးပြအဖွဲ့ ဆက်ကြေးတောင်းခံထား
၁၂။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုကိုပြသသောအနေဖြင့် ရခိုင်သင်္ကြန်အပျော်အပါးလွန်ကျူးမှုမဖြစ်ရန် မဟာရက္ခိတအဖွဲ့ပန်ကြား
၁၃။ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရက် ၆၀ အကြာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျဆုံးပြည်သူ ၅၄၀ ကျော်လာ
၁၄။ ကော့ကရိတ်မြို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် စစ်သား ၂ ဦးနှင့် ရဲ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ။
၁၅။ ဆော့လော်မြို့နယ် အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခေါ်မာဝူဖမ်းဆီးခံရ
၁၆။ “ပိုက်လိုင်းများ ကာကွယ်ရန်” တရုတ်တပ်များ မြန်မာနယ်စပ်တွင် ချထား
၁၇။ CRPH ၏ ၂၀၀၈ခြေဥဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် ကြိုဆို
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ တပ်မဟာ-၃ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဆောထိ(ရွှေကျင်)မြို့နယ်ရှိ မယ်ဒမတ်ချောင်းဖျား၊ လေချိုတောင်အနီးတွင် မတ်လ ၃၀ရက်၊ ယမန်နေ့ မွန်းလွှဲ ၃နာရီခန့်၌ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှင့် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်သောကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၅ ဦး ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ဗုံးကြဲသည့်နေရာမှာ ဆောထိ(ရွှေကျင်)မြို့နယ် KNU-လက်အောက်ခံ KNLA တပ်ရင်း ၇ နှင့်နီးပြီး သေဆုံး၊ ဒဏ် ရာရသူများမှာ အရပ်သားပြည်သူများဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၅ ဦးတွင် KNU သစ်တောဌာန အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ပါဝင်နေ ကြောင်း အဆိုပါဒေသရှိ လူမှုရေးရာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့မနက်ကလည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ တပ်ဘက်မှ ထိုဒေသရှိ KNU လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၇နှင့် ဆောထိမြို့နယ်ရုံးဧရိယာတွင်
ဒရုန်းနှင့် ထပ်မံ စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။“ပထမတစ်ရက်မှာ လေယာဉ်ဗုံး လာပစ်ချတယ်။ ဒုတိယ ရက်မှာ ဒရုန်းနဲ့ လာစုံစမ်းထောက်လှမ်းတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး သတိထားရတယ်။ အရင်တုန်းက တပ်ရင်း(၇)မှာ ဒရုန်းနဲ့စုံစမ်းတာမရှိဘူး။ အခုက ပစ်ချက်ယူဖို့လားတော့ မသိဘူး။ ခန့်မှန်းလို့တော့ မရသေးဘူး။”ဟု လူမှုရေးရာအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် လာရောက်ဗုံးကြဲပြီးသည်နှင့် ရွှေတူးကုမ္ပဏီ အလုပ်သမား ငါးဦးမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သလို ဒဏ်ရာရသူ များထဲမှ ထပ်မံ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းအရင်းအမြစ်များက ပြောဆိုသည်။ ဗုံးဒဏ်ကြောင့် လူထိ ခိုက်သေဆုံးသည့်အပြင် ဘက်ဖိုးကား ၃ စီးနှင့် ဆယ်ဘီးကား ၄ စီး မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီး တပ်ရင်း (၇)နှင့်နီးသည့် ကျေးရွာအချို့မှ ရာနှင့်ချီသော ဒေသခံလူထုမှာ ယခုအချိန်တွင် ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရကြောင်းလည်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2021/04/knu-%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲ၊ နမ္မတူမြို့နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း တိုက်ပွဲ ကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး ကျေးရွာသား ငါးရာနီးပါး ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ ကျေးရွာတွေ တစ်ဝိုက် စစ်ရေးထပ်မံတင်း မာနေပြီး ထပ်မံထွက်ပြေးသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်နဲ့ နမ္မတူမြို့နယ်တွေမှာ ရှမ်းပြည်တိုက်တက်ရေးပါတီ SSPP ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ TNLA တပ်တွေ တိုက်ပွဲကြောင့် အရပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိပြီး ရာနဲ့ချီ နေရပ်စွန့်ခွာနေရပါတယ်။
နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံ၊ မန်ကျန်းရွာတစ်ဝိုက်အခုလ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က RCSS နဲ့ TNLA/SSPP ပူးပေါင်း အဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲ ကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းကို လက်နက်ကြီးတွေကျလို့ အသက်ငါးဆယ်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး နေအိမ် နှစ်လုံး မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ ကျေးရွာရပ်မိ ရပ်ဖတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲကြောင့် ပန်ကျန်းရွာ၊ ပန်လုံ ရွာသားတွေဟာ ပန်သပြေ၊ ရေအိုးရွာတွေကို တိမ်းရှောင်နေပြီး နေရာ နှစ်ခုမှာ လူဦးရေ လေးရာကျော်ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့ ဒီကနေ့မှာလည်း ထပ်မံထွက် ပြေးလာသူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ ဒေသခံတွေနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ တွေက တောင်းဆို တာရှိပေမယ့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ တွေ့ဆုံနိုင်တာ မရှိသေးပါဘူး။ တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RCSS နဲ့ SSPP တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဖုန်းဆက်သွယ်လို့ မရသေးပါဘူး။ TNLA ပြောခွင့်ရ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မိုင်းအိုက်ကျော် ကတော့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုင်း အဲဒီနေရာတွေကို RCSS က ဝင်ရောက် နေရာယူလာ ခဲ့တာကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း သူတို့သိမ်းပိုက်ခံထားရတဲ့နေရာတွေကို ပြန်လည်ရယူရာမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ RCSS နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ အကောင် အထည်မဖော်နိုင်သေးသလို လတ်တလောမှာလည်း ဆွေးနွေတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ https://www.rfa.or g/burmese/news/northern-shan-attack-04012021055617.html
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ကချင်တပ်မတော် KIA တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေ ရှိနေသလို စစ်အာဏာရှင် အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒပြတဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလည်း နေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်။ ဖားကန့်မြို့ရဲ့ အဓိက သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ အေးမြသာယာ၊ ဆိုင်းတောင်၊ လုံးခင်း- မော်ဝမ်း သပိတ်စစ်ကြောင်း တွေဟာ လူဦးရေ ထောင်နဲ့ချီ နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် မတ်လ ၁၄ရက်နေ့မှာ ဆိုင်းတောင်းစစ်ကြောင်းက ကိုကျော်လင်းထိုက်(၃၁) နှစ် ၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့မှာ အေးမြသာယာစစ်ကြောင်းက ကိုသန့်ဇော်(၁၉) နှစ်တို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း နေရာတော် တော်များများမှာရှိတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေကို ကချင်တပ်မတော် KIA က ဝင်ရောက် စီးနင်းတိုက် ခိုက်ခဲ့မှုတွေ မတ်လ အတွင်းမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရဲ့ စစ်ရေးအခြေနေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကချင်တပ်မတော် KIA ရဲ့ သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနက ပြောဆိုခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါ “စစ်ရေးအရတော့ တင်းမာနေတဲ့ အခြေနေတွေရှိ ကြောင်းနဲ့ စစ်ကောင်စီဘက်က လေယာဉ်တွေနဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်လာတာတွေရှိသလို KIA တပ်စခန်း အနီးတဝိုက်တွေမှာ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်နဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မနေ့က ဧပြီ (၁) ရက်နေ့မှာလည်း ဖားကန့်မြို့နယ် ရှဒူးဇွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့သလို လီဒိုလမ်းမတ ကြောက ယုဇနကုမ္ပဏီဝင်းဘက်မှာလည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ တွေကြောင့်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၄၀၀ လောက်ရှိနေပြီး လုံးခင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ နှစ်ချင်းဘုရား ကျောင်းနဲ့ မှော်စီစာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ယာယီ ခိုလှုံနေကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/ news/kia-phakant-protest-coup-04012021145354.html
မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ချင်းငြိမ်းချမ်းရးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအသင်း(CCPR )ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲခံထားကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်ပြီး ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဟားခါးမြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးပြန်ထုတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း လိုက်လံကူညီပေးနေသည့်ရှေ့နေများထံမှသိရသည်။
“ဒီနေ့တော့ တရားရုံးက မအားဘူးဆိုတော့ ကျွန်မတို့ကို တွေ့ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ တရားလိုသက်သေမှာ ဟားခါးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ထွက်ဆိုတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ CDM ဝင်ထားတဲ့ရဲ၊ ခုလက်ရှိထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ရဲ မာလ်ဆောမ် သူတို့ကို သက်သေအဖြစ်ထွက်ဆိုခိုင်းတယ်၊ တရားလိုသက်သေ ရဲ နှစ်ဦးပေါ့။ အဲဒီ မာလ်ဆောမ်က ထွက်ဆို တဲ့ နေရာမှာ သူတို့ကို ပိုက်ဆံ ငါးသောင်းပေးထားတဲ့လူသည် ဒီ ဗန်ကျဲအိုထောင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ ပိုက်ဆံပေးတဲ့လူက ဗန်ကျဲအိုထောင်း ဟုတ်သလားဆိုပြီးတော့ ရှေ့နေကမေးတယ်၊ သို့သော် သူကမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ ဒါဆိုဘယ်သူလဲ ၊ ဘယ်သူ လဲတော့မသိဘူး Mask အုပ်ထားတယ်၊ ဒါမယ့် ဒီကောင်လေးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထွက်ဆိုတယ်။ နင်တို့သွားတဲ့ချိန် ကားမောင်းတဲ့ လူကိုသိလားလို့ ရှေ့နေကပြန်မေးတယ်၊ မသိဘူး လို့ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင်ခု ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့သူ(ပီတာ) ဟုတ်သလားလို့ပြန်မေးတယ်။ သူမောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သူ ပြန်ထွက်ဆိုတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ တရားလိုသက်သေဖြစ်တဲ့ CDM ဝင်၊ ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ ရဲ ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရမ်းကောင်းလို့ အားတက်စရာပါပဲ။ ဒါမယ့် တရားသူကြီးနဲ့တော့ ပြောခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။” ဟုတရားစွဲဆိုခံထားရသည့် CCPR ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် လိုက်လံကူညီပေးသူ ရှေ့နေ ကပြောသည်။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ချင်းလူမျိုး ၁၅၃ ဦးကျော် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ဟားခါးမြို့တွင် လူဦးရေ ၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း သိရသည်။ ယေဘုယအားဖြင့် ရဲစခန်းတွင် ပုဒ်မ ၄၇ နှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲကြပြီး များသောအားဖြင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲမှု ပိုများကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://www.bni online.net/mm/news-80117
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ဧပြီလ ၁ ရက်ကစလို့ တလတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာထားပေမယ့် မြို့ပေါ်မှာ တော့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မူတွေက ရှိနေတာပါ။ မုံရွာ ၊ မန္တလေး အပါအ၀င်မြို့တွေမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူထုတွေကို ပစ်ခတ်မူတွေဆက်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူတွေ ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ် ၊ ဖာပွန်ခရိုင်၊ ဖာပွန်မြို့ ပေါ်မှာတော့ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီကျော်အထိ ပစ်ခတ်မူတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ ဖာပွန်မြို့ခံတဦးက ပြောပြပါတယ်။
“မိုးချုပ်တာနဲ့ စပစ်နေတာ။ မီးဖြတ် ၊ အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တွေလည်း အကုန်လုပ်ထားတယ် ။ ၆ နာရီလောက်ကနေ စပစ်တာ၊ လက်နက်ကြီးလည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နည်းတယ် လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်နေတာများတယ်။ သူတို့ကို ကေအန်ယူက လုံးဝပစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ပဲ ပစ်နေတာ ။ အခုကလောလောဆည်မြို့ထဲမှာပဲ လိုက်ပစ်နေတာ ကေအန်ယူ ပါဝင် ပစ်ရင်တော့ အကုန်လုံးပြာကျကုန်မှာပဲ။ တောက်လျှောက် သူတို့ပဲ ပစ်နေတာ ၊ ကေအန်ယူဘက်က လာမပစ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုလည်း ဆန္ဒပြတာတို့ဘာတို့ ခေါင်းတောင်မထောင်ရဲဘူး။ အခုက ကေအန်ယူက လုံးဝမပစ်ပဲ စောင့်ကြည့်တယ် ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းကဆို ကေအန်ယူက၀င်ပစ်တာရှိတယ်။ အခုပစ်ရင်တော့ လည်း ပြည်သူလူထုပဲ နာမယ်ဆိုတော့လေ။ အခုဆိုရင်လုံးဝ အိမ်ထဲမှာမနေရဲပဲ ချောင်းကမ်းဘေးတွေမှာပုန်းနေရတယ်။”ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ကေအန်ယူတို့ဟာ မကြာခဏ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်ရာဒေသ မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေကိုလည်း အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကတည်းက လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်မူတွေရှိနေတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကတော့ သီးမူထာ မြန်မာစစ်တပ်စခန်းကို KNUက သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ကရင်ကျေးရွာ တွေကို လေယာဉ်တွေနဲ့ပါ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် အရပ်သားအိမ်တွေ မီးလောင်ပြီး ဒေသခံရွာသားတွေ သေဆုံးတာ ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးရွာသားတွေ တသောင်းလောက်ဟာ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ် အခုချိန်ထိ တောတောင်တွေထဲမှာပဲ နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဖာပွန်မြို့ပေါ်က လူနေအ်ိမ်တွေကို လည်း ညဘက်တွေမှာပစ်ခတ်မူတွေ လုပ်လာတဲ့အတွက်မြို့ခံ လူထုတွေဟာအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ ပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/krean-ongoing-local-offensive-by-the-myanmar-army-/5837923.h
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တွင် စခန်းချထားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) တပ်စခန်းများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု စစ်ကောင်စီ မှ ချင်းရိုင်းခရိုင် မယ်ဆိုင်မြို့နယ်ခြားကော်မတီထံ အသိပေးထားသည်သူ သိရသည်။ ထိုစာကို စစ်ကောင်စီ ၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မတ် ၂၉ ရက်တွင် ကျိုင်းတုံ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး ယခုကဲ့သို့သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
RCSS/SSA သည် တနိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် တွင် နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို စစ်ကောင်စီမှ သိမ်းယူပြီးနောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ (၁၀)ဖွဲ့ က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးမည် မဟုတ်ကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် RCSS/SSA၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ကလည်း စစ်ကောင်စီ မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို နေ့စဉ် သတ်ဖြတ်နေသည့်ပေါ် ကန့်ကွက်ပြီး၊ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်သွားမည်ဟုလည်း နှင့် CNN ၊ Reuter ( ရိုက်တာ) သတင်းဌာန တို့ကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် လွိုင်ကော်ဝမ်း RCSS/SSA တပ်စခန်း မှ အရာရှိ တဦးက “ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အဆင့်သင့် လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က ယာမ သောက်ပြီး ရူးနေတဲ့သူအတိုင်းပဲ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာ။ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုကတော့ ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရသေးပါဘူး” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာတဝှမ်းလုံး ပြည်သူများက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီမှ ပြည်သူများကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ကို ယနေ့ထိပြုလုပ်နေသည်။ လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် RCSS/SSA တပ်စခန်းမှလည်း စစ်ရေးဖြစ်လာမည်ကို သတိဖြင့် စောင့်ကြည့်နေရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/21499
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)က တောင်းဆိုထားသည့် အကြမ်းဖက် ဥပဒေဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသူများအား လွတ်ပေးရန်၊ ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွင် ရာထူးနေရာပေးရန်စသည့်ဖြင့် တောင်းဆိုချက်များကို စစ်ကောင်စီမှ လက်ရှိ အချိန် အထိ လိုက်လျော့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ANP ပါတီမှ နိုင်ငံရေး မူဝါဒရေးရာ ကော်မတီဝင် ဦးဖေသန်းက“အကြမ်းဖက်နဲ့ စွဲထားတဲ့ လူတွေကို လွတ်ပေးဖို့၊ ပြည်နယ် အဆင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှာ နေရာပေးဖို့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေကို မလိုက်လျော့သေးဘူးလို့ ပြောလို့ ရတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ သို့သော်လည်း အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး အမှုရင်ဆိုင် နေရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ပြန်လည်လွှတ်ပေးရေးအတွက် ပါတီအနေဖြင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ANP မှ ပါတီခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် ဒေါ်အေးနုစိန်ကိုယ်တိုင်လည်း အထက်ပိုင်းတွင် တင်ပြပြောဆို နေမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဦးဖေသန်းက ပြောသည်။ ထို့ပြင် ANP အနေဖြင့် ပြည်နယ် ကောင်စီ ဥက္ကဌ နေရာနှင့် နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကောင်စီတွင်အဖွဲ့ဝင်နှစ်နေရာပေးရန် တောင်းဆိုထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ မရရှိသေး သဖြင့် အနီးဆုံး ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး မူဝါဒရေး ရာ ကော်မတီဝင် ဦးဖေသန်းက ပြောသည်။
အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် တရားစွဲခံရသူများ အရေးကိစ္စမှာ ယခုအချိန်တွင် ရက္ခိုင့် စစ်တပ် (AA) ကို အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့ မှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ဥပဒေအရဆိုရင် ပြန်လွှတ်ပေးရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် မယူကမ်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးမောင်စောဝင်းက ပြောသည်။“ANP အနေနဲ့ ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ တောင်းဆိုတာကတော့ ဒီအချိန်မှာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ပြည်နယ် အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ က ပြည့်သွားပြီလေ။ ဆိုတော့ ကျနော်အမြင်က ANP အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆွေးနွေးမှ ဒေါ်အေးနုစိန်ကို ကောင်စီမှာ ထည့်သင့်တယ်။ အခု မြင်နေရတာက သမီးကို လင်ပေးစား ပြီးမှ အသွင်း တောင်းဆိုနေသလို ဖြစ်နေတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/new s/2021/04/01/240221.html
၎င်းတို့နယ်မြေ၊ ကရင်လူထုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင် စီတပ်၏ရန်ကို ရင်ဆိုင်ခြင်းမှတစ်ပါး အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ကြောင်း ကေအဲန်ယူ-ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး မူတြော်ခရိုင်၊ တပ်မဟာ ၅ က ယမန်နေ့ မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ကာ ပြောဆိုလိုက်သည်။“ယခုအချိန်တွင် မြန်မာ တပ်မတော်၏ မြေပြင်တပ်များသည် အရပ်လေးမျက်နှာ အဖက်ဖက်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်မြေအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ကျူးကျော် လာလျက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤအခြေအ နေကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူထုထု၏ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက် အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်မြေ၊ ကရင်လူထုနှင့်၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တိုင်းပြည် အာဏာကို တရားမဝင်သိမ်းယူထားသော မြန်မာတပ်မတော်၏ရန်ကို ရင်ဆိုင်ခြင်းမှတစ်ပါး ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားရွေး ချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ပါ”ဟု ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၇ရက်နေ့က မူတြော်ခရိုင် သံလွင်မြစ်ကမ်းနံဘေးရှိ သီးမူထာ စစ်ကောင်စီ တပ်စခန်းကို ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ တပ်ဖွဲ့မှ တက်ရောက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဘက်မှ ကေအဲန်ယူ မူတြော်ခရိုင် တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေအတွင်း လေယာဉ်ဖြင့် အဆက်မပြတ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သောင်းနှင့်ချီသော ဒေသခံ ပြည်သူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှုအပေါ် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ က ယခုလို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီတပ်၏ လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကလေးသူငယ်အပါအဝင် ၈ ဦး သေဆုံးပြီး ၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ရသလို မူတြော်ခရိုင်တွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူ ၁၀,၀၀၀ ကျော်သည် အိုးအိမ် စွန့်ခွာပြီး နီးစပ်ရာတောတောင်များတွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီး သံလွင်မြစ် ကမ်းနံဘေးတစ် လျှောက်ရှိ ဒေသခံရွာသား ၃,၀၀၀ ကျော်သည်လည်း သံလွင်မြစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်လည်း တိုင်းပြည်အာဏာကို မတရားသိမ်းယူထားသော မြန်မာတပ်မတော်အား အသိအမှတ်မပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့နှင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် စစ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုကြောင်း၊ လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးကို ဆန့်ကျင်သော မြစ်မှုကို မြောက်စေသည့် ပြည်သူထူထုအပေါ် လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းက ဖက်စစ်မြန်မာ့ တပ်မတော်ကို ဖိအားပေးရန် တောင်းဆိုသည်ဟု ကေအဲန်ယူ မူတြော်ခရိုင်က တောင်းဆို ထားသည်။ http://kicnews.org/2021/03/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%8 0%b1%e1%80%
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ၅၂(ခ)တို့နဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲ ခံနေတဲ့ရတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ပလက်ဝမြို့နယ် တရားရုံးကနေ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ မိသားစုဝင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာ အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ် မောင်စိုးကျော်လင်းနဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ကိုထွန်းလင်းဇော်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးနောက် AA နဲ့ ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီး အကြမ်း ဖက် ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေကိုလည်း အမှုပြန်ရုပ်သိမ်းတာတွေ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူငယ်နှစ်ဦးလည်းတရားလိုကအမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မောင်စိုးကျော်လင်း ရဲ့ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ဒေါင်းမလေးက ပြောပါတယ်။ သူတို့ဟာ အပြစ်တစုံတရာမရှိဘဲ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အခုလို လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိတယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် စတင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က စိမ့်စင်းကျေးရွာဘက်မှာ တံတားဆောက်လုပ်ဖို့သွားစဉ် ခမရ ၂၈၉ တပ်ရင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် AA နဲ့ ဆက်စပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးသက်နိုင်ဦးက တရားလိုလုပ်ပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ စစ်ရေးပဋိပက္ခကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံထားရတဲ့သူ ၂၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ စစ်တွေအခြေစိုက် သဇင်ဥပဒေအထောက်ပြုအဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-detainees-04012021132958.html
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းပေါ်ရှိ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ယုဇနကုမ္ပဏီကို ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA က ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း သိရသည်။
ဘန်ကောက်ကျေးရွာတွင်ရှိသော ယုဇန ကုမ္ပဏီကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ၁နာရီခန့်အချိန် KIA တပ်ရင်း ၁၄ တပ်ဖွဲ့က ဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး စက်ယန္တရားများနှင့် ဂိုဒေါင်များကို မီးရိူ့ဖျက်စီးပေးလိုက်ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ “ဖြစ် တာက ည ၁နာရီလောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ ကုမ္မဏီမှာရှိတဲ့ ဘက်ဟို၊ ဘဒိုဇာ၊ ကား ၅ စီး၊ ကာလိုဒါ ၃စီး၊ လမ်းကျိတ်စက် ၂ စီး၊ ပစ္စည်းထားတဲ့ဂိုဒေါင် ဒီဟာတွေကို မီးရိူ့ပေးလိုက်တယ်လို့သိရတယ်။ ဒီမနက်အတွင်းထိ ကုမ္မဏီ အတွင်း မီးလောင်နေတာတွေရှိသေးတယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးပြောပြသည်။ ဂိုဒေါင် ၄ ခု နှင့် ကား ၂၃ စီး မီးရှို့လိုက် ကြောင်း သိရသည်။ ယုဇန ကုမ္ပဏီကို အာဏာသိမ်းစစ်သားများက ယခင်က တပ်စွဲထားမှုများရှိသော်လည်း ယနေ့ နံနက် တိုက်ပွဲတွင်မူ မရှိကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့်မှစတင်ခဲ့သော ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ စစ်အစိုးရ၏ ပီလောပီနံ စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သောကြောင့် ဒေသခံများ၏ မြေယာအများအပြား သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီး ယနေ့ အထိ ဟူးကောင်းဒေသခံများနှင့် ယုဇန ကုမ္ပဏီကြား မြေယာ ပြဿနားများ ပုံမှန် ဖြစ်ပေါ်နေသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/04/01/apr-1-y1/
မွန်ပြည်နယ် ရေးတောင်ပိုင်းဒေသ ခေါဇာမြို့အနီးတဝိုက်တွင် ယခုအခါ ဓါးပြအဖွဲ့ငယ်တချို့ ပြန်လည်သောင်းကျန်းလာပြီး ဆရာတော်များ၊ ကျေးရွာအကြီးအကဲများထံမှတဆင့် ကျေးရွာများကို ဆက်ကြေးငွေ သိန်းရာနှင့်ချီတောင်းခံထားကြောင်း မွန်သတင်းအေဂျင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။“မန်ကြီးရွာ သိန်း ၃၀၀ မိထော်လှာကြီး သိန်း ၂၀၀ ကြုံညာရွာ သိန်း ၃၀၀ တောင်းထားတယ် အရောအ်နဲ့ အချမ်းအဖွဲ့လို့ သိရတယ်၊ အရင်က လက်နက်ချ အလင်းဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓါးပြတွေပဲ အခုတော့ ဒီအလုပ်ကို ပြန်လုပ်နေကြပြန်ပြီ” ဟု အမည်မဖော်လိုသော ဒေသခံဆရာတော်တစ်ပါးက ပြောသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါဆက်ကြေးတောင်းခံမှုကို သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာများသို့ အချက်အလက် မှန်ကန်ကြောင်း မွန်သတင်း အေဂျင်စီမှ အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။“ လောလောဆယ် တချို့ရွာတွေကို ငွေတောင်းထားတယ်၊ သူတို့ဆက်ကြေး မပေးရင် လူကိုပြန်ပေးဆွဲသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်ရပါတယ် နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိတော့ဘူး၊ နောက်ပီး စစ်တပ်ကနေ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ကို အင်အားတိုး ချပေးထားတယ်” ဟု ကျေးရွာအကြီးအကဲတစ်ဦးက မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောကြားသည်။
ယခင်က ရေးတောင်ပိုင်းနှင့် ရေဖြူမြို့နယ်တို့တွင် နိုင်ဗင်းနှင့် နိုင်လှိန်းညီအစ်ကိုယ်အဖွဲ့၊ ဆံရှည်နှင့် တောင်ကျော်အဖွဲ့၊ အလွန်နှင့် အဆောင်းညီအစ်ကိုယ်အဖွဲ့(၁၅ ယောက်) ၊ မွန်ချမ်းအဖွဲ့ (၁၈ ယောက်) စသည့်ဓါးပြအဖွဲ့များလှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း သတင်းမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ဓါးပြခေါင်းဆောင်အချို့သတ်ဖြတ်ခံရသဖြင့် အဖွဲ့အချို့ပြိုကွဲသွား၍ လက်ကျန်အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၂၀၁၆ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်ထံ နောက်ဆုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်လာကြရာမှ နယ်မြေအေးချမ်းမှုရရှိလာခဲ့သည်။ ခေါဇာမြို့တွင် ခလရ (၃၁) တပ်ရင်းနှင့် ရဲစခန်းတစ်ခု အခြေစိုက်လျက်ရှိသော်လည်း နယ်မြေကျယ်ဝန်း၍ တောတောင်ထူထပ်သဖြင့် ဒေသခံများအတွက် လုံခြုံရေး အပြည့်အဝရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့်အနေအထား မရှိသေးပေ။ http://burmese.monnews.org/2021/04/0 1/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အရေးအခင်းအတွင်း ပြည်သူများ သေကြေပျက်စီးမှုများရှိနေ၍ သင်္ကြန်အခါကြီး ကာလအတွင်း အပျော်အပါးလွန်ကျူးမှုအား မပြသကြပါရန် မဟာရိက္ခတအဖွဲ့က ရခိုင်ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြား လိုက်သည်။ မဟာရိက္ခတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အာရ်ကန် ဦးမောင်လှ (ခ) ဦးမောင်သန်းနုက “ ကျွန်တော်တို့ အခု ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း တို့၊ မန္တလေး တို့ အပါအဝင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတို့မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ပတ်သက် လို့ ဟို ခလေးလေးတွေ သေကြေပျက်စီးနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်ကနေပြီး တော့ ဒီလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သင်္ကြန်ထဲမှာ မော်တော်ကားတွေနဲ့ ဆောင်းဘောက်စ်တွေတင်ပြီး အဲသလို သီချင်းတွေ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး မလုပ်ကြဖို့ ဥစ္စာကို ကျွန်တော်တို့က မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ သဘောပါ”ဟု နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန သို့ ပြောကြားသည်။
မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလွှာအထဲတွင် ယခုအခါ ဗမာပြည်/ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၌ ပြည်သူအပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ သေကြေ ပျက်စီးနေကြသည်ကို မြင်တွေ့ရမှုအား အလွန်တရာမှ စိတ်မမြေ့ဖွယ်ခံစားနေကြရသော အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှေးစကားပုံအတိုင်း အိမ်ရှေ့ပူ အိမ်နောက်မချမ်းသာ၊ အိမ်နောက်ပူ အိမ်ရှေ့ မချမ်းသာ အဖြစ်မျိုး ပြည်သူ/ ပြည်သား အပေါင်းတို့မှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ခံစားနေကြရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ရက္ခိတပြည်သူ အပေါင်း တို့က သေကြေပျက်စီးသွားကြသည့် မိသားစုများနှင့်ထပ်တူ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုကို ပြသသောအနေဖြင့် သင်္ကြန်အခါကြီး ကာလအတွင်း ဆောင်းဘောက်(စ်)များ တင်ဆောင်၍ ကားကြီး၊ ကားငယ်များဖြင့် အပျော်အပါးလွန်ကျူးမှုအား မပြသကြ ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံအသိပေးပန်ကြားအပ်ပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ အဓိကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ဟာ နှလုံးသားကောင်း မေတ္တာတရားကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က ဖော်ထုတ် ပြသတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုတာပါ။ ရခိုင်ပြည်သူတွေလည်း နားလည် သဘောပေါက်လိမ့် မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကနေ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရအောင်၊ ဝမ်းနည်းပက် လက်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်က မပျော်ဘူးဆိုတာကိ်ု ပြသဖို့အတွက် ပြည်သူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံတောင်း ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ အခုလုပ်တဲ့ ဥစ္စာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ပုတ်ခတ်တာ၊ အစိုးရကို ပုတ်ခတ်လို့ ပြောတာ မပါဘူး။ အဓိက ပြည်သူတွေ နစ်နာနေတာကို ကျွန်တော်တို့က မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒါလည်း တစ်ချက် ပြောချင် ပါတယ်။” ဟု အာရ်ကန် မောင်လှက ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-80111
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရက်ပေါင်း ၆၀ အကြာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု တွေကြောင့် မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ကာလတွင်း ကျဆုံးပြည်သူပေါင်း ၅၄၃ ယောက် ရှိလာခဲ့ပြီလို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီ ပီ)က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ဧပြီ ၁ ရက်အထိ မှတ်တမ်း ပြုစုထားတာဖြစ်ပြီး ဒီအရေအတွက်ဟာ အေအေပီပီမှ ကောက်ယူရရှိထားတဲ့ အရေအတွက်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ကျဆုံးသူတွေဟာ ဒီ့ထက် ပိုများနေနိုင်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူ စုစုပေါင်းကတော့ ၂၇၄၁ ယောက် ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အဲဒီထဲက ၃၈ ယောက်ကတော့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီး အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ဖမ်းဝ ရမ်း ထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက် တိမ်းရှောင်နေသူ ၁၂၆ ယောက်နဲ့ ခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အေအေပီပီ အနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင် နေတာဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံ ထားရသူတွေစာရင်းကို နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အရပ်သားတွေ၊ တက်ကြွလှုပ် ရှားသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေ၊ CDM လှုပ်ရှား နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့ နယ်ပယ်အသီး သီးက ဘယ်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်း၊ တရားစွဲဆိုခံထားရတာကို သိရှိပါက ဆက်သွယ် အသိပေး၊ အကြောင်းကြားဖို့လည်း အသိပေးထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/455703
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့တွင် ယမန်နေ့ မတ် ၃၁ ရက်၊ ည ၇ နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်သား နှစ်ဦး နှင့် ရဲတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့မရဲစခန်းအနီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် စစ်ကောင်စီအဖွဲ့၏ ရဲ နှင့် တပ်မှ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ တစ်ဦးက လက်ပစ်ဗုံး ပစ်ထည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးသတင်းအဖွဲ့ နှင့် နီးစပ်သူထံမှ သိရသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံ အချက် ၅၀ ကျော်ကြားရကြောင်း ကော့ကရိတ်မြို့ခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားများကို ကော့ကရိတ်မြို့တွင်း၌ မပြုလုပ်နိုင်ဘဲ မြို့ပြင် ကျေးရွာများတွင်သာ ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့အလားတူပင် မြဝတီမြို့တွင်း၌လည်း စစ်ကောင်စီမှ ခန့်အပ် ထားသည့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့် နှင့် တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ထောက်ခံသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့၏ သတင်းပေး မှုများကြောင့် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန် စတင်စုစည်းစဉ်မှာပင် အဖမ်းခံရမှုများနှင့် နေအိမ် လူနေရပ်ကွက်အထိ လိုက်လံဖမ်းဆီးခံရမှုများ ရှိနေသည်။ http://kicnews.org/2021/04/%e1%80%b1%e1%80 %80%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ကချင်ပြည်နယ်၊ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ အနိုင်ရရှိထားသည့် NLD ပါတီမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခေါ်မာဝူကို ယနေ့ နေ့လယ် (၁၁) နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း အမည်မဖော်လိုဒေသခံတစ်ဦးမှ သိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရချိန် ဒေါ်ခေါ်မာဝူသည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ပမ္မတီးလီဆူစာပေယဉ်ကျေးမှုဗဟိုရုံးတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ် (စရဖ) မှ အမျိုးသား ၃ဦး လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဖမ်းဆီးခံသွားရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်လှယ် ခေါ်မာဝူအား မည်သည့်နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း မသိရသေး ချေ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဖမ်းဆီးမူများရှိခဲ့သော်လည်း အများစု ပြန်လည်လွှတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021 /04/01/apr-1-z1/
ရှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မူဆယ်တဘက်ခြမ်းရှိ ဂျယ်ဂေါင်တွင် တရုတ်တပ်များကို ချထားကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်ရှိ သတင်း ရင်းမြစ်များအဆိုအရ သိရှိရသည်။ စစ်ကားများနှင့် တရုတ်စစ်သားများ နယ်စပ်သို့ လတ်တလော ရက်ပိုင်းများအတွင်း ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သတင်းစကားပေးပို့နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များက ဆိုကြသည်။
ပိုက်လိုင်းများကို ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟု ဆန္ဒပြသူများက ခြိမ်းခြောက်သည့် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များ မြင့်မားလာ ချိန်အတွင်း မတ်လ အစောပိုင်းက ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအား ကာကွယ်ပေးရန် စစ်ကောင်စီကို တရုတ် က တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရှည်လျားသည့် ပိုက်လိုင်းများသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှနေ၍ မကွေး၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်သို့ သွယ်တန်းထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင် စီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတို့တွင် မြန်မာပြည်ရှိ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း ယူသည့်အပေါ် ပြည်တွင်းရေးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနေသည်။
စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ ဆန္ဒပြသူ ၅၀၀ ကျော် သေဆုံးလာသောအခါ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော် (MNDAA)၊ တအန်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) တို့ပါဝင်သည့် ညီနောင် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့က စစ်ကောင်စီကို ရှုတ်ချပြီး အပစ်ရပ်ထားမှုကို ရက်ထပ်မတိုးကြောင်း ကြေညာသည်။ ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့သည် တရုတ်နယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်ပြီး AA က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တွင်လည်း အခြေစိုက်သည်။ တရုတ်နယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်သော ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ကလည်း ယခုအခါ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွား နေသည်။ https://burma.irrawaddy. com/news/2021/04/02/240239.html
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းလိုက် ကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေငြာလိုက်သည့်အပေါ် ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း ဥပဒေ အထောက်အကူပြုကွန်ရက် (Legal Aid Network)က ဧပြီလ ၁ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် CRPH က ယခုလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် စစ်ကောင်စီ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည့် ခြေလှမ်းကို လှမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာအမျိုးမျိုးနှင့် အကြံပြုချက်များအကြားမှ CRPH ၏ ပြတ်သားသည့် ခြေလှမ်းများ လှမ်းသည့်အခါတိုင်း ၎င်းတို့ကွန်ရက်အနေဖြင့် ကြိုဆို၊ ထောက်ခံ၊ အသိအမှတ်ပြုသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စေရေးအတွက်ကိုလည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းက လွတ် လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့် အခြေခံတွင် ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုကိုလည်း CRPH အနေဖြင့် လက်ခံစဉ်းစားပေးလိမ့် မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
CRPH ၏ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ခုနှစ်)သည် စစ်အာဏာရှင်ဝါဒ သက်ဇိုးရှည်ရန် ရည်ရွယ် ရေးသားထားရုံမျှမက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားပြုလျှက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ၎င်းအပြင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ခု နှစ်)ပါ ပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်လျက် နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မသိမ်း ယူခဲ့ခြင်းကြောင့် ဤဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပျက် ပြယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org/2021/04/crph-%e1%81%8f-%e1%81%82%e1%81%80%e1% 81%80%e1